Amathiphu Amakati Nezinyoni Zokuzwana | Amakati kaNoti
Isithombe - Emailvariety.com
Into ejwayelekile ukuthi uma besibuza ukuthi amakati nezinyoni zingahlala ndawonye yini, ukuphendula ngo-cha omkhulu. Futhi lokhu kuyinto enengqondo ngokuphelele: omunye ungumzingeli owazi kahle ukuthi angabamba kanjani inyamazane yakhe, kanti omunye, yize enekhono lokundiza, uba nengozi enkulu uma esondela kulowo osolwayo.
Kepha iqiniso yilokho akuyona yonke into emhlophe futhi akuyona yonke into emnyama. Kwesinye isikhathi labo abathola isimanga - futhi obuhle, ngasendleleni - yithi. Ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi lezi zilwane ezimbili ezihluke kakhulu zizwana kanjani, ungayeki ukufunda.
1 Yenza ikati lihlangane nezinyoni lapho lisencane (kakhulu)
2 Thenga ikheji lezinga
3 Ziqaphele ngaso sonke isikhathi
Yenza ikati lihlangane nezinyoni lapho lisencane (kakhulu)
Kubaluleke kakhulu, ukuthi izinyane lekati lazi futhi lihlale nezinyoni lapho lisencane, ikakhulukazi phakathi kwezinyanga ezimbili noma ezintathu zokuphila. Kungani? Ngoba kuseminyakeni ebucayi kangako lapho i-feline iqala ukufunda ukuthi izosebenzisana nobani, ngubani ongazwani nayo, yini impango nokungeyona, njll
Uma ehlala nonina, uzoba nguthisha wakhe, ngokwemvelo emfundisa ukuthi zonke izilwane ezincane ezihambayo zingabanjwa. Kepha uma kungenjalo, kuzoba nguwe ozoba nethuba lokumenza abone ukuthi izinyoni zingaba abangane bakhe.
Thenga ikheji lezinga
Kulungile, izinyane lekati lincane, kepha akudingeki ukuthi ube sengozini. Le nyoni kumele ibe sendaweni yokukhosela eqinile, uma kungenjalo uswazi angalujikijela phansi, aphuke futhi avuleke ... futhi uma kwenzeka okwenzekile, inyoni izondiza ibaleke, kubangele ukuthi ikati lokuzingela lekati livuke.
Ngakho-ke, ukugwema izinkinga nokwethuka, uzovumela le nyoni ukuba ibe semgodini wayo okungenani amasonto ambalwa okuqala. Kuzodingeka unikeze imiklomelo ye-feline ngendlela ye-caresses ngakho-ke uyabona ukuthi le nyoni imele okuthile okuhle njengothando.
Uma usubona ukuthi ikati lizolile, okusho ukuthi, lilele phansi, noma ukuthi lifisa ukwazi kodwa ngaphandle kokufinyelela eqophelweni lokufuna ukulizingela, ungayikhulula le nyoni.
Ziqaphele ngaso sonke isikhathi
Noma ikati lincane kakhulu, futhi noma ngabe ucabanga ukuthi izethulo zihambe kahle, ungazethembi. Ungalokothi ubashiye bodwa ngoba kungenjalo kungavela izinkinga. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuzola, ngoba izinzwa zizokwenza izilwane zingazizwa kahle.
Ngiyethemba kube usizo kuwe to.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Amakati nezinyoni, angahlala ndawonye?
Ngiyabonga kakhulu ngezeluleko! Ngangifuna ukuba nekati, kodwa nganginovalo lokuthi lizobulala izinyoni zami.
Uma ikati likhuliswa lisencane nezinyoni, empeleni akumele kube nezinkinga. Kepha njengoba ngisho, ngokomthetho. Ngeke sikhohlwe ukuthi ikati lingumzingeli, nokuthi lihle kakhulu ekuzingeleni izinyoni ezincane.
Uriel u-ramirez kusho
Futhi ingabe ikati lingalthelela kalula kanjani upholi wePasteurella?
Phendula u-Uriel Ramírez
Yisifo esidluliswa njengegciwane elibandayo elihlasela abantu; okungukuthi, ngokukhwehlela nokuthimula.
Kungakho kubalulekile ukuvimbela: ukugoma, ukugcina izilwane zihlukanisiwe uma kwenzeka umuntu egula (noma kunokungabaza ukuthi unjalo), futhi wondleke kahle.
Kuthiwani uma unamakati amadala, futhi ufuna inyoni? Kukhona okuzokwenzeka, amakati afike adlule futhi angabazingeli kakhulu, kodwa ngicabanga ukuthi uma ngiyikhombisa le nyoni ngoba incane, futhi ngizoqikelela ukuthi akukho okuzokwenzeka, angifuni ukuhlala ngiyibutha ngaso sonke isikhathi
Mina ngokwami ​​bengingeke. Ikati elidala selivele liyazi ukuthi kungaba yini ukudla kwakhe nokuthi yini okungeyona, nokuthi inyoni izobona.